Mateo iyo Thiago oo u guddoomay aabahood Messi abaal-marinta Golden Boot… + SAWIRRO – Gool FM
(Barcelona) 16 Okt 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa loo caleemo saaray abaal-marinta Golden Boot ee ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan Yurub xilli ciyaareedkii hore.
Lionel Messi ayaa abaal marintan ku guuleystay markii saddexaad oo xiriir ah, kaddib markii uu dhaliyay 36 gool horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii hore.
Messi ayaa wuxuuna ku garaacay abaal marintan weeraryahanka kooxda Paris St Germain ee Kylian Mbappé (33 gool) iyo weeraryahanka Sampdoria ee Fabio Quagliarella (26 gool).
Kabtanka kooxda Barcelona ayaa ku guuleystay abaal-marintan markiisii lixaad xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, wuxuuna kaga sareeyaa xiddiga ay ku xilfaltamaan kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo, kaasoo loo caleemo saaray afar jeer ee horey.
Mateo iyo Thiago oo ah wiilasha uu dhaliyay Lionel Messi ayaa abaal marintan u gudoomay aabahood inta lagu gudi jiray xaflad la qabtay maanta oo Arbaco ah isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen qoyska Messi, iyo sidoo kale saaxiibadiis Barcelona sida Luis Suarez iyo Jordi Alba.
Waxaa sidoo kale xafladan goobjoog ka ahaa madaxweydnaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu, sidoo kale xoghayaha farsamada ee kooxda Eric Abidal iyo tiro kale ee ka mid ah saraakiisha naadiga.
Lionel Messi ayaa kaddib marka uu guddoomayay abaal marinta Golden Boot wuxuu ka hadlay dareenkiisa wuxuuna yiri:
“Waxaan u mahad celinayaa qoyskeyga, tababarayaasha iyo asxaabtayda, waxaan u mahadcelinayaa Luis Suarez iyo Jordi Alba oo iyaga dartood aan ugu guuleystay abaal marintan markii lixaad”.
“In kasta oo aan ahay qofka ku guuleystay abaalmarinta, laakiin waxay sharaf u tahay qof kasta, waad ku mahadsan tihiin oo waxaan kulmi doonaa sannadka soo socda” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Lionel Messi.